Mweya wemukati kana moyo unorara – Kune chinhu chakadaro here?
» Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Mweya wemukati kana moyo unorara – Kune chinhu chakadaro here?
Mweya wemukati kana moyo unorara – Kune chinhu chakadaro here?
“Mweya unorara” hakusi kutaura kunobva muMagwaro.
Pfungwa iyi inobva pakufungidzira kuti kana vanhu vakafa, mweya yavo inorara isina chainoziva kusvikira zuva rerumuko kana pakumutswa kwevakafa.
Asi kurara hachisi chinhu chiri munzvimbo yemweya yepamusoro. Muviri ndiwo unoda kurara, kwete mweya.
Vanhu vanorwara vanokurudzirwa kurara kuitira kuti mweya wemukati mavo unatse muviri nekurwisa hurwere.
Jakobo akarara akarota danhu kana manera aienda kuDenga.
Genesisi 28:11 Akasvika pane imwe nzvimbo, akavatapo usiku, nokuti zuva rakanga ravira; akatora rimwe ibwe ipapo, akaritsamira, akavata pasi ipapo.
12 Akarota, akaona danhu rakanga rami­swa panyika, musoro waro wakasvika kudenga; akaona vatumwa vaMwari va­chikwira nokuburuka naro.
Muviri unotongwa nepfungwa dzedu dzenyama, dzatinogona kudzora, uyezve unotongwawo nepfungwa dzemweya dzatisingagoni kudzora. Pfungwa dzenyama dzinodzima patinorara. Asi pfungwa dzaJakobo dzemweya dzaive dzichishanda dzikagona kuona chiroto. Tichiwedzera, ndangariro dzake dzaive dzichiri kushanda sezvo aikwanisa kurangarira chiroto ichi paakamuka.
Nekufamba kwemakore vanhu vakaona zvakachenjera kurara kana paine nyaya iripo vasati vaita sarudzo. Izvi zvinotendera ndangariro dzemweya kuti dzizeye zvese zvenyaya iyoyo vobuda nesarudzo yakafanira, kana zvichibvira. Kangani katinoedza kurangarira kana zita chairo asi patinorara kamwechete kana kaviri, zita racho rinobva rauya kubva kundangariro dzedu torangarira mupfungwa dzedu. Kana takarara pfungwa dzemweya dzisina basa nerubatsiro rwenyama yedu dzinoshanda zvakasununguka pasina kupindira kwepfungwa dzedu dzinoshanda kana zvichibva pakuda kwedu.
Kurota hope dzinotyisa kunonyanya kuitika kana vanhu vachifunganya zvakanyanya pamusoro pechimwe chinhu zvekuti pfungwa dzavo dzinoshanda nekuda kwavo hadzizorore pavanorara, saka nekudaro dzinobva dzasangana nepfungwa dzinoshanda pasina kuda kwedu dzobva dzapindira kana tarara.
MAPISAREMA 121:4 Tarirai, muchengeti waIsiraeri Haangakotsiri kana kuvata.
Mwari haarari. Mwari ndiMweya. Saka kurara hachisi chinhu chinoitika munzvimbo dzeMweya dzepamusoro soro.
Tinorarama munzvimbo yezvikamu zvitatu zvinoti nzvimbo muchadenga matinoona uye makavanzwazve munzvimbo yepamusoro yechina yenguva isingaonekwe.
Nzvimbo yemweya yepamusoro-soro ndiyo Denga riri kunze kwenzvimbo yechina yenguva, saka haina chinokonzereswa nenguva kwairi.
Kunewo nzvimbo yemweya yezvakanaka nezvakaipa kunogara mweya yakaipa, uye kunoenda mweya yevanhu vakarasika kana vafa. Uku kunonzi kugehena kana nzvimbo dzevakarasika. Nzvimbo yakazara zvakaipa iyi ichakandirwa muGungwa reMoto pakupedzisira. Nekuti dzakasungwa nenguva, nzvimbo dzemweya dzevakarasika idzi dzirimo muzvikamu zvenzvimbo yechina isingaonekwe.
Rufu ndiko kuparadzaniswa kwemweya nenyama kana muviri.
Muviri unopinda muguva hauna chaunoziva.
MAPISAREMA 6:5 Nokuti parufu hapana achakurangarirai; Ndiani achakuvongai paSheori?
Hupenyu kana mweya wemhuka inenge yafa hunorasirwa muguruva. Hupenyu kana mweya wemunhu hunokwira kuna Mwari kunodavira nekuda kwemweya wemukati kana moyo wakaputirwa muhupenyu hwemunhu kana mweya wekufema.
1 Samueri 25:29 mweya washe wangu ucharamba wakasungirwa pachisote chavapenyu vari kuna Jehovha Mwari wenyu,
Rufu rwekutanga kuparadzaniswa kwemweya (une mweya wemunhu mukati mawo kana moyo) kubva kumuviri kana mutumbi. Ipapo mweya usina kuponeswa unobva waenda kunzvimbo dzevakarasika kunomirira zuva reKutongwa. Mweya wakaponeswa unoenda kuDenga.
Rufu rwechipiri ndiro dziva remoto. Kana kurwadziswa kwevanhu vasina kuponeswa kwapera vapedza kuripira zvivi zvavo uye kusatenda kwavo, mweya yavo yemukati inoparadzaniswa nemweya wehupenyu wekufema vobva vanyangarika kubva ipapo.
Jesu akaparidza mufananidzo wezvinoitika kune vasina kuponeswa kana vafa.
Ruka 16:22 Zvino murombo wakati afa, vatumwa vakamuisa pachifuva chaAbrahama. Mufumi akafa vo, akavigwa.
23 Zvino ari muHadhesi, ari pakurwadziwa, akatarira kumusoro, akavona Abrahama ari kure, naRazaro, ari pachifuva chake.
24 Akadanidzira, akati: Baba Abrahama, ndinzwirei ngoni; tumai Razaro, kuti anyike muromo womunwe wake mumvura, atonhodze rurimi rwangu, nokuti ndinorwadziwa nomurazvo uyu womoto.
25 Abrahama akati: Mwana, funga kuti wakapiwa zvakanaka zvako pavupenyu bwako; naRazaro, saizvozvo wakapiwa zvakaipa; asi zvino iye unonyaradzwa pano, iwe unorwadziwa.
26 Vuye pazvinhu izvi zvose, mukaha mukuru wakaiswa pakati pedu nemi, kuti vovuno vanoda kuenda mhiri kwamuri, vakoniwe, novo’ko varege kuyambukira kwatiri.
Gehena inzvimbo yevakarasika, inzvimbo yemweya yepamusoro. Ikoko mweya yevakarasika inomirira Kutongwa. Rimi (muhumwechete) hakusi kutsanangurwa kwemoto. Moto unobvira nendimi zhinji. Rimi rakataurwa riri rimwechete rinomirira kurwadziswa pandangariro pamafungiro emunhu pavanoona nekuzoziva kuti vakararama muhumbwende hwakadii pavaikoshesa zvinhu zvenyika ino. Pavanofa vanobva vaona kuti havana chavanacho. Vanenge varasa hupenyu hwavo. Zvese zvinenge zvavamirira mberi kutongwa nekurangwa mudziva remoto. Kuziva kwavanoita kuti vakarasa zvese kurwadziwa kwakakurisa mundangariro dzavo.
Razaro, murombo, aive naAbrahama. Abrahama aive akamuka zvakazara muParadhiso yeTestamente Yekare uye aikwanisa kutaura nemupfumi, chero zvake aive afa makore anodarika 1800 aive adarika.
Chakaipisisa kuvanhu vasina kuponeswa kana vafa, ndechekuti vatendi vavakatsvinyira nekushora vanenge vakurarama zvakadekara muParadhiso. Mupfumi aive asina kurara (zvinodaidzwa kuti “mweya unorara”) sezvo aive mukurwadziswa kukuru. Aikwanisa kufunga nekukumbira rubatsiro. Asi kwaive kusina aikwanisa kubatsira. Mweya yakaipa iri mugehena sevamwe vake vaaive akugara navo yaitowedzera kumurwadzisa. Yakamumisa kutenda, apa yaive yatanga kumurwadzisa serema nekuti akateerera mweya iyoyo. Kwaive kusisina nzira yekupunyuka nayo kwaari. Mweya pachawo haurari. Wakazadzwa nezviroto pamusoro peramangwana uye kudemba pamusoro pehupenyu hweDenga hwawakaramba.
ZVAKAZARURWA 14:11 Vutsi bwokutambudzika kwavo bwunokwira nokusingaperi- peri; havanezororo masikati novusiku, ivo vanonamata chikara nomufananidzo wacho nounogamuchira chiratidzo chezita racho.
Mweya isina kuponeswa haina zororo, masikati nehusiku. Hakuna kurara hope kwavari kuti vagone kupunyuka kurwadziswa nekutambudzika.
Pamunorara pfungwa dzenyu dzinoshanda pasina rubatsiro rwekuita kwenyu dzinotonga kurova kwehana yenyu dzoramba dzichiita kuti ropa renyu rirambe richifamba kupfurikidza kudzora maringi etsinga akapoteredza tsinga dzenyu dzinodzosera ropa kumoyo. Mapapu anobva aramba achifema. Masero emumuviri menyu anoramba achipisa chikafu kuti mudziirwe uye muve nesimba. Itsvo dzenyu nechitaka zvinoramba zvichinatsa ropa renyu. Kana muchirwara masoja emuviri wenyu anorwisa hutachiona nezvirwere. Ndicho chikonzero nei pfungwa dzichiita kuti munhu anorwara agare akaneta achinzwa kuda kurara. Kana munhu akarara simba rakawanda rinokwanisa kushandiswa kurwisa hurwere.
Saka mweya wemunhu wemukati, watisingaoni kushanda kwawo sezvo uchishandira pachidanho chepamusoro pezvatingagone kufungira nepfungwa dzedu dzenyama, unenge uchibata basa guru apo pfungwa dzedu dzatinoshandisa zvatinoziva dzinenge dzakarara.
Tarisai zvinotaurwa nevesainzi pamusoro pekurara.
"Rapid eye movement sleep (REM sleep, REMS) inguva dzakasarudzika dzinorara mhuka neshiri, dzinotsanangurwa nekufamba kwemaziso kusina kugadzikika”.
“Simba renjere rinoshandiswa mukurara kweREM, sekupimwa kwaro nemweya wakanaka wekufema uye gurukosi metabhorizimu, rinoenzana kana kudarika simba rinoshandiswa pakufamba.
Mune mamwe mazwi, zvinotora simba rakawanda kurara serinotorwa kana munhu akamuka. Saka pfungwa dzedu dzinotitendera kuziva zviri kuitika ndidzo chete dzinodzimwa. Pfungwa dzinoshanda muchivande kana muchamweya dzinotonga metabhorizimu dzinoshanda maawa makumi maviri nemana zuva nezuva.
“Munzvimbo ina dzepfungwa dzinobata basa muzviitiko zvemupfungwa, munoratidza zviitiko zvakaenzana mukurara kweRME uye munhu paanenge akamuka”.
Simba redu rekufunga zvakadzama haridzimi. Chikamu chepfungwa ichi chinotsvaga zvinhu zvatakakanganwa mumatura endangariro dzedu. Chinofungawo pamusoro pematambudziko edu chinova chikonzero nei tichimuka tane maonero matsva pamusoro pedambudziko ratanga tichitambudzika naro.
“Kufamba kwemaziso kusina kugadzikika kunokonzereswa nepfungwa padzinenge dzichishanda nendangariro dzinofambidzana nezvinhu zvamakaona”.
Ndangariro dzezvinhu zvamunoona dzinosanganisa kufunga pamusoro pezvinoitika muchityaira motokari, muchisunga shangu, kana muchichovha bhizautare, kuti kana mukamuka munokwanisa kuita zvinhu izvi musina kubvira maisa kufunga kwakadzama pakuzviita. Saka kana mukarara, pfungwa dzenyu dzemweya dzinoramba dzichidzokorora nhanho dzezvinhu zvese zvamakadzidza kuti muzviite pasina kuisa ndangariro dzakanyanya pazviri. Saka hatizokanganwe zvinhu izvi totenda dzokororo yazvo inoitika mupfungwa dzedu husiku tirere.
Kurara kwakakoshera nguva yekuzorora kwenyama dzedu uye kusimba kwadzo apo mweya wedu wemukati, watisina simba rekutonga, unogonesa muviri kuti uzorore uwane simba idzva.
Mwana anotora nguva yake zhinji mugore rake rekutanga akarara sezvo zvichiwedzera kukura kwake zvakapetwa kaviri pagore rekutanga. Kuita kwakakosha uku kusingazodzokororwe mune mamwe makore ake ese kunoda kuongororwa zvakakwana pamusoro pepfungwa dzatisingazivi mashandiro adzo dzakavanda dzaasingagoniwo kudzora maitiro adzo zvimwechete nepfungwa dzake dzinenge dzichishanda paanenge akamuka.
Saka nguva yekurara haisi nguva yekuti mwana anenge asina zvaanenge achiita, inguva yezviitiko zvakakosha zvemweya wemunhu.
Jesu akauya kuzomutsa mwanasikana kubva kurufu. Akataura pamusoro perufu sekurara hope. Nei?
Mateo 9:24 Akati kwavari, Ibvai nokuti musikana haana kufa asi uvete. Vakamuseka.
Kurara kuita kwekuti muviri wenyama unogona kumutswa. Muviri wenyama nepfungwa dzemunhu anenge akamuka hazvina ruzivo rwezvinoitika kwazviri kana munhu arere. Asi mweya wemunhu unokwanisa kuwadzana nedenga kupfurikidza kurota nezviratidzo zvinoitika mupfungwa dzemunhu paanenge akarara.
Mweya wemukati haurare. Hana inorova. Ropa rinofamba. Mapapu anofema. Chiropa neitsvo zvinonatsa ropa nezvimwe zvakadaro.
Saka zvakadaro nerufu. Mutumbi unenge uri muguva hauna ruzivo rwezvinenge zvichiitika. Asi parumuko, muviri unomutswa wodzoswa pakurarama zve. Parizvino mweya wemunhu unenge uri kudenga (kana akaponeswa) kana kugehena (kana asina kuponeswa) unenge uchiziva zvinenge zvichiitika kwauri munzvimbo dzekumusoro dzemweya.
Pagomo reKubwinya Jesu akadana mweya waMosesi (aive akafa) naEria (asina kufa). Paive pasina musiyano pakati pavo. Vaive vachiri maprofita vese vaitokwanisa kutaura naJesu pamusoro perufu rwake rwaizouya.
Eria akakwira kudenga nengoro yemoto. Akakwira kudenga kunorara here? Hazvina kuita sekudaro. Aive achiri akamuka zvakazara uye achiziva zvese zvaizoitika kuna Jesu paCalvari.
Zvimwechetezvo naMosesi. Aive afa, asi aive kure nekunzi akarara, aive achiri kuziva pamusoro pezvaizoitika kumberi.
RUKA 9:30 Zvino tarira, varume vaviri, vana Mosesi naEria, vakavonekwa vachitaurirana naye.
31 Vakavonekwa mukuhwinya, akataura zvokuenda kwake kwaakanga wondopedzisa paJerusarema.
Eria akaenda nengoro yemoto. Haana kubvira afa. Haana kubvira arara.
Mambo Sauro vakamboenda kumukadzi muvuki paEndori kuti anodana mweya wemuprofita Samueri kubva muParadhiso. Izvi ndizvo zvakataurwa naSamueri kuna Sauro.
1 Samuel 28:19 Zvino JEHOVA uchaisa vaIsiraeri pamwechete newe mumaoko avaFirisitia; mangwana iwe navanakomana vako muchava neni; JEHOVA uchaisa hondo yavaIsiraeri mumaoko avaFirisitia."
Samueri chero aive afa, akaprofita kuti vaFirisitia vaizokunda hondo, uye kuti Sauro nevanakomana vake vaizofa zuva ramangwana.
Izvozvo ndizvo zvakaitika. Saka Samueri, chero aive afa kubva pamaonero edu isu enyama mutumbi wake uri muguva, aive achiziva kwazvo zvinhu zvemunzvimbo dzemweya dzeParadhiso sezvo aiziva zvaiitika, uye aiziva zvaizoitika zuva raitevera.
Enoki akakwira kudenga asina kufa ari mupenyu.
Bhaibheri haritauri pamusoro pemibhedha kuDenga.
Rangarirai, mweya wemunhu wemukati kana ndangariro dzemukati hadzivati, chero pano panyika. Mweya uri mamuri unofanira kuita kuti ropa renyu rirambe richifamba netsinga dzemuviri wenyu, mapapu enyu achifema uye muviri uchishanda.
Kubva kuDenga idzva guta rekupedzisira, Jerusarema Idzva, rinouya pasi kunyika itsva sepiramidhi guru. Dombo remusoro waro ndiye Kristu. Chiedza pamusoro pepiramidhi chinozadza mativi epiramidhi ese nechiedza. Saka guta iri richava nechiedza chisingadzimi.
ZVAKAZARURWA 21:25 Masuwo aro haangatongozarirwi masikati, nokuti vusiku habwuchazovipo.
Saka rima haringazovipo paguta. Husiku hahuchazovipo zve. Saka hakuna acharara kuDenga.
Jesu paaive akaturikwa pamuchinjikwa, akati mbavha yaive parutivi pake yaifa yaizonosangana nayo kuParadhiso musi iwoyo. Saka mbavha yakafa zuva rakuda kudoka aizonosangana naJesu munzvimbo yepamusoro yemweya zuva risati radoka. Mbavha yaifanira kuva yakamuka ichiziva zvaiitika kuti isangane naJesu muParadhiso mumashure mekufa kwake.
RUKA 23:43 Iye akati kwaari: Zvirokwazvo, nhasi uchava neni muParadhiso
Mumashure mekufa Jesu aive arara. Aifanira kutora zvivi zvedu oburukira kugehena kunozvirasira kuna Diaborosi. Jesu aifanira kunokurira Satani, kukurira rufu, nekukurira hadhesi. Aifanira kuita izvi zvese ari munhu nekuti aive Hama mudzikinuri akafa ari Munhu kuti tisunungurwe kubva kuzvivi.
Jesu aive akamuka zvakazara chinguvana mumashure merufu rwake. Akasvika munzvimbo dzevakarasika sedutu rinoparadza. Vaive vasina kubvira vashanduka. Akatora makiyi erufu nehadhesi kubva mumawoko aSatani. Akakurira Diaborosi akasairira madhimoni ake akakanda mapfumo pasi. Akabva aburitsa vatsvene vose vaive muParadhiso yeTestamente Yekare. Mweya waKristu waitova pabasa guru mazuva ose ekupera kwevhiki rekufa kwake.
Pauro akatorwa akaenda kuDenga rechitatu. Ichi chaive chiitiko chekunze kwemuviri chaishamisa.
2 VAKORINTE 12:2 Ndinoziva munhu uri munaKristu, ave makore anegumi namana apfuvura, (kana zvakaitwa mumuviri, kana kunze kwomuviri, handizivi; Mwari unoziva), munhu wakadai wakakwidzwa kudenga rechitatu
4 kuti wakakwidzwa muparadhiso, akanzwa mashoko asingagoni kutaurwa, asina kutenderwa munhu kuti areve
Haana waakaona akarara. Akanzwa vanhu kutaurirana vaive vachiziva zvakawanda kudarika vanhu venyama zvavangagone kutsanangura. Vari kure nekunzi vavete, vatsvene vaive munzvimbo yedenga iyi vaive vakomborerwa nepfungwa dzaive dzakachenjera nekure, kudarika chero Einstein wenyika ino zvaangava. Vaitaura zvinhu zvemberi zvepamusoro-soro kudarika zvingafungwa nepfungwa dzedu dzenyama. Vatsvene vakafa vakaita boka revanhu vakachenjera, vari pamberi kwazvo kudarika chero munhu ari pasi pano. Miviri yavo yakanatswa inogara munzvimbo dzepamusoro dzemweya ine pfungwa dzakasunungurwa kubva kuzvivi saka vanogona kutaurirana zvinhu zviri pamusoro kwazvo pane zvatinogona kunzwisisa isu pano pasi.
Kure kwazvo nekurara hope, mweya yevatsvene vakafa inopiwa miviri yakanatswa miviri yemweya kuti igare mairi munzvimbo yepamusoro yemweya kudenga, uko zvinhu ndezvepamusoro-soro uye zvakanakisa pane zvatingafungire. Mutsvene akafa ari kuDenga anofanana nemwana muduku ari muchitoro chematoyi akakomberedzwa nezvinodakadza zvekufara nazvo.
1 VAKORINTE 2:9 Asi sezvazvakanyorwa, zvichinzi: Izvo zvisina kuvonekwa neziso, kana kunzwika nenzeve, Nezvisina kupinda mumoyo womunhu, Ndizvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda.
2 VAKORINTE 5:1 Nokuti tinoziva kuti kana imba yedu yenyika, tabernakeri yedu, ichiputswa, tinechakavakwa chinobva kunaMwari, imba isina kuvakwa namavoko, isingaperi, iri kudenga.
2 Nokuti tinogomera vo mairi, tichishuva kuti tifukidzwe neimba yedu inobva kudenga;
Patinofa tinopihwa miviri yemweya (inodaidzwawo kuti miviri yekudenga) yakatimirira kuDenga. Kutenda kwenyu panyika kunobereka kusimba mumiviri yenyu yemweya.
1 VAKORINTE 15:40 Kune miviri yokudenga, nemiviri yenyika; asi kubwinya kweyokudenga ndokumwe, nokwenyika ndokumwe.
44 Unodzvarwa uri muviri wokuberekwa, unomutswa uri muviri womweya. Muviri wokuberekwa uripo, nomuviri womweya uripo
Zvino pakupedzisira vakafa vanomutswa apo muviri wavo wemweya unoiswa mumuviri wokubwinya.
VAROMA 8:30 Avo vaakatemera kare, ndivo vaakadana vo; vaakadana, ndivo vaakaruramisa vo; vaakaruramisa, ndivo vaakakudza vo.
Ngatitarisei maJuda mumakore 2000 enhorondo yekereke.
Kubva pakaparadzwa Jerusarema neTembere nemukuru wemauto eRoma Tito muna 70 AD apo vanhu vanosvika 1.1 miriyoni vechiJuda vakafa, maJuda ndivo vakabva vava vanhu vakauraiwa nekurwadziswa zvakanyanya nguva dzese pasi rese. Hitira nekuuraya kwake kweNazi akauraya maJuda mamiriyoni matanhatu mukati mehondo yepasi rese yechipiri. MaArabu nemaParesitina vanoramba vachirwisa maJuda. Asi kumaJuda akafira kutenda kwawo kweTestamente Yekare, Mwari ane nzvimbo yakasarudzika paaritari yevakafira chitendero.
ZVAKAZARURWA 6:9 Wakati azarura chisimbiso chechishanu, ndikavona panyasi pearitari mweya yavanhu vakanga vavurawa nokuda kweshoko raMwari, nokupupura kwavo kwavakapupura;
10 Vakadana nenzwi guru vachiti: Tenzi mutsvene wazvokwadi, mucharega kutonga vanogara panyika nokuvatsiva ropa redu kusvikira riniko?
MaKristu havatsvagi kutsiva nekuti vakauraiwa. MaJuda vanotenda kuti ziso kuziso. Mwenga paanotorwa kukwira kuDenga pakati nepakati peChisimbiso chechina, maJuda anobva akumbira kuburuka kuAmagedhoni kunotsiva. Asi vanoudzwa kuti vamire. Pakutanga maJuda 144000 vanofanira kudanwa kunaJesu munguva yeKutambudzika kukuru, vouraiwa naantikristu. Ipapo vanenge vakukwanisa kuburuka panyika kunoparadza antikristu nemauto ake paAmagedhoni.
Saka maJuda akaurairwa kutenda kwawo ari kuziva zviri kuitika. Vakamuka vachivavarira kutsiva. Boka remaJuda aya arikuda kwazvo kutsiva rikasunungurwa pamusoro pake, chikara kana Pope waantikristu haazozivi chinenge chamuwira.
Hakuna kurara munzvimbo dzepamusoro dzemweya. Vatumwa kana mweya yakaipa hairare.
Kurara kunodiwa nepfungwa dzevanhu vanorarama muhunhu hwedu hwakarasika kuchiri kushanda mumiviri yedu inowora. Patinobvisa hunhu hwedu hwevanhu hwakazara zvivi pakufa, Mweya Mutsvene unenge uri matiri unobva watora mweya wedu wakadzikinurwa kuenda nawo kuDenga. Mwari ndiye Mweya Mutsvene uye haarare zvachose. Kana isu hatizorari, patinenge tabvisa miviri yedu izere zvivi uye mweya yevanhu yakazara zvivi.
Pauro haana kubvira ataura pamusoro peDenga senzvimbo yekurara.
VAFIRIPI 1:21 Nokuti kwandiri kurarama ndiKristu, kufa kufuma.
22 Zvino kana ndichirarama panyama, izvo zvichandipa zvibereko zvokubata kwangu; handizivi chandichasanangura;
23 Zvino ndinomanikidzwa nezvinhu zviviri: ndinoda kubva, kuti ndive naKristu, nokuti ndizvo zvinopfuvura nokunaka;
Pauro ndiye watingati muKristu mukuru, akadzidza zvakawandisa kubva kuna Mwari asi aitofara kufa sezvo izvozvo zvaizova nani kwazvo. Mumuviri wake mutsva wemweya (kana muviri wekudenga) mumashure merufu rwake aizogona kunzwisisa zvakavanzika zvakadzama kudarika zvakavanzika zvakadzama zvaaive achinzwisisa nakare ari panyika.
2 VAKORINTE 5:8 Tinotsunga moyo vo, tichiti zvirinani tirege kugara pamuviri, kuti tigare kunaShe.
Patinofa tinenge tava kunaShe asingatsumwairi kana kurara.
Hazvina kunaka zvachose kurara pamugere nevamwe.
Mufaro wekuva Pahuvepo hwaJesu unozoita kuti vanhu vose vasarare.